Admin activity review/2013/Notice to inactive right holders/so - Meta
Admin activity review/2013/Notice to inactive right holders/so
Haddii aan nahay stewards waxaan soo gudbin doonaan jawaabaha. Hadii aaneey dhicin wax jawaab ah bil gudaheed, waxaan guda gali doonaan in aan sii wadno in lagaa xayuubiyo xilka ama maamulka. Haddii laga shakiyo, waxaan guda gali doonna diyaarinta in laga dhiidhiyo waxaana ku celin doonaan mujtamacaada si ay uga faaloodaan. Haddii aad qabto wax su'aal ah, fadlan nagala soo xiriir m:Stewards' noticeboard.
Sidaas iyo nabad gelyo, (saxiixa).
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Admin_activity_review/2013/Notice_to_inactive_right_holders/so&oldid=15322602"
Admin activity review/Notices/so